Samirka iyo Dulqaadka - Ma Guuldarraysanaysid Haddii Aanad ka Hadhin Himmiladaada - Diblomaasi
Yaxye Yaasiin Xasan
‘Markaad rabto nolosha inaad guul ka gaadho ha moogaan samirka iyo dulqaadka oo ah labada shay ee aan noloshu ka maarmi Karin si aad uga badbaado guul daro. samirku waa sahayda guusha, dulqaadkuna waa shidaalka.’
Amaal Bashiir Garaase
Samirku waa halbawlaha shay wal oo la qabanayo, samirku waxa uu uga taagan yahay arrimaha halka uu madaxu uga taaganyahay jidhka samirku waa hoyga halyeeyada adduunka ,lama arag adduunka nin libaaxa hadii la arkayna waxa uu ku mutaystay halyeeynimada adkaysi iyo u dhabar adayg uu u dhabar adaygo dhibaatooyinka soo maraya, haddaba adduunka lama arag cid bilaa Samir ah oo guuleysata. maxaayeelay markaad wadada guusha maraysid waxaa kaa hor bixi ama ku soo wajihi guuldarrooyin farabada, caqabado, niyad jab, hanjab iyo quusasho laakiin waxaas oo dhibaataa waxaad kaga bixi kartaa Samir iyo dulqaad soomaalidu waxaay ku maahmaahdaa “ nin samraa sad leh.”
Ma guuldarraysanaysid haddii aanad ka hadhin himmiladaada
Abrahan Lincoln wuxuu ku dhashay 12 february 1809kii Hodgenville, Kentucky abrahan Lincoln hooyadii iyo abbihii waxaa ay ahaayeen danyar sabool ah waxay daganaayeen guryo kirro ah oo iyagu aysan lahayn. waxbana ma haysanin noloshooduna aad ayay u liidatay, Abrahan Lincoln yaraantiisi noloshaas mugdiga ah ayuu ku soo koroy. Abrahan Lincoln markuu yar koray hooyadiis oo aad u jeclayd in uu wax u barto wiilkeedu si uu nolosha sabooltinimada ugu saaro ayaa waxaa ay ku dartay iskuul. laakiin nasiib darro hooyadiis way awoodi waysay in ay lacagta iskuulka ka bixiso wiilkeeda si uu wax ugu barto oo uu noloshan mugdigaa uga saaro.
Abrahan Lincoln hal sano kaliya ayuu dhigtay iskuulka caadiga laakiin aqalkooda dhaxdooda ayuu wax isku bari jiray aadna wax uu ugu akhriyi jiray. Abrahan Lincoln isaga ayaa naftiisa waxbaray hooyadiina waay ku dhiirigalin jirtay inuu naftiisa waxbaro, waxayna siin jirtay waxwalbo uu uga baahdo xageeda. 1818kii hooyadiisi uu aadka u jeclaa ee dhiirigalin jirtay ayaa dhimatay Abrahan Lincoln aad ayuu uga murugooday dhimashada hooyadii waxayna ku noqotay boog aan ka go’ayn toban sano kadibna walaashii oo ahayd qofta kaliya xafadooda u shaqaysa oo biisha ayaa dhimatay.
Dhimashada walaashii kadib Abrahan Lincoln waxaa uu go’aan ku ku gaaray inuu shaqaysto oo biilka xafada isagu bixiyo Abrahan Lincoln waxaa uu ka shaqa galay dukaan oo uu ka ahaa dukaan haye xagaas ayuu ka shaqayn jiray oo nolol maalmeedkiisa kala soo bixi jiray muddo kadib nasiib darro waa laga eryay shaqadiisi iyada oo loo aanaynayo inaanu lahayn dulqaad kadib markuu shaqadii laga eryay wuxuu ku biiray siyaasada. 1832kii waxuu uu tartamay goloha deegaanka (state legislature) laakiin waa uu ku guuldarraystay is la sanadkaas wuxuu go’aansaday inuu galo kuliyadda sharciga.
Laakiin u ma ay suurrobin in uu galo kuliyadda waxaase uu qorshaystay inuu cilmiga sharciga isagu is barro waxaana uu soo iibsaday buugaagta laga dhigto sharciga habeen iyo maalinna wuu akhriyi jiray ilaa uu noqday qareen sharci yaqaana. Taariikhdu markay ahayd 1833kii Abrahan Lincoln wuxuu lacag ka daynsaday saaxiibadii si uu ganacsi ugu bilawdo laakiin wuu ku guuldarraystay ganacsigaas sanadkii xigay 1834 wuxuu mar labaad u tartamay goloha deegaanka Illinois markanse wuu ku guulaystay waxaa uuna ka mid noqday xildhibaanada goloha deegaanka Illinois. Aadna wuu ugu farxay maxaa yeelay waxay ahayd markii ugu horeeysay oo uu nolosha guul ka gaadho.
1835 tii wuxuuna qorshaystay inuu guursado Ann rutledges oo ahayd gabadh ay is jeclaayeen, mudo badana wada sheekaysanayeen, nasiib-darro maalmo yar markay arooskii ka harsantahay ayaa Ann rutledges dhimatay Abrahan Lincoln jaceyl iyada uu qabay darteed waxaa ku dhacay xanuun dhinaca neerfaha ah wuxuuna lix billood yaalay hosbitaal.
1838kii waxaa uu isku sharaxay afhayeenka golaha deegaanka (state legislature speaker) wuu se ku guuldarraystay mudo kadib wuxuu u tartamay congress-ka misena wuu ku guuldarraystay. 1848 wuxuu ku guuldarraystay dib u magacabistii congresska inuu ka qayb qaato, sanad kadib na waxaa loo diiday land officer inuu noqdo 1854 wuxuu u tartamay. U.S senate ama golaha sare Maraykanka laakiin wuu ku guuldarraystay.
1856 wuxuu isku sharaxay madaxwayne ku xigeen hadana wuu ku guuldarraystay hadana mar kale sanadkii 1858 wuxuu ku guuldarraystay inuu senater noqdo intaas oo guuldarro ka dib 1860 wuxuu ku guulaystay in loo doorto madaxwaynaha dalka Mareykanka isagoo taariikhdana ka galay madaxwaynayaashii maraykanka kuwii ugu qiimaha badnaa maxaa yeelay waxaa uu xorreyey dadkii madoobaa ee la gumaysan jiray ama wuxuu tirtiray ka ganacsiga addoonta (slave trade) waxaa kaloo uu mideeyay gobollada koonfureed iyo waqooyi ee Maraykanka xiligii dagaalkii sokeeye.
Sanad Da’da Guuldarro iyo guul
1816 7 Guryihii ay daganaayeen ayaa laga saaray.
1818 9 Hooyadii ayaa dhimatay.
1828 19 Walaashii ayaa dhimatay.
1831 22 Shaqadii ayaa laga eryay.
1832 23 Wuxuu u tartamay golaha deegaanka, waa ku guuldarraystay.
1833 24 Ganacsigii ayuu ku guuladarraystay.
1834 25 Wuxuu u tartamay mar labaad goloha deegaanka ,waa ku guulaystay.
1835 26 Gacalisadiisi ayaa dhimatay.
1836 27 Waxaa ku dhacay xanuun nerve ah (nervous breakdown).
1838 29 Wuxuu u tartamay afhayeenka golaha deegaanka,wuu ku guuldarraysta
1843 34 Wuxuu u tartamay goloha shacabka (congress), wuu ku guuldarraystay
1846 37 Wuxuu u tartamay mar labaad goloha shacaka, wuu ku guulaystay.
1848 39 Dib loo ma soo dooranin ama lama soo magacaabin.
1849 40 Waxaa loo diiday land officer inuu noqdo.
1854 45 Wuxuu u tartamay golaha sare (senate) wuu ku guuldarraystay.
1856 47 Wuxuu isku sharaxay madaxwayne ku xigeen , wuu ku guuldaraystay.
1858 49 Wuxuu u tartamay mar labaad golaha sare wuu ku guuldarraystay.
1860 51 Waxaa loo doortay madaxwaynaha mareykanka (USA).
Jaan.1.6.guushii iyo guuldarradii Abrahan Lincoln
Cid aan adiga ahayn kama masuul aha guul iyo guuldarro kasta oo kula soo gudboonaata.
Boqorkii la odhan jiray Napeleon Puna Part, oo markii laga adkaaday loo mastaafuriyey jasiiradda Sant Helena, waxa uu yidhi; “Qof aan aniga ahayn kama masuul aha hoogayga iyo jabkayga.” Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa raaciyey; “Waayo, waxaan ahaa cadowga ugu weyn ee naftayda.”
Related Topics:Samirka iyo Dulqaadka - Ma Guuldarraysanaysid Haddii Aanad ka Hadhin Himmiladaada
Waa qoraa ka tirsan Somalism. Qoraagga ayaa qoray buuggaag kala duwan sida buugga Baadigoobka Guusha, Wahsi Tire iyo iyo qoraalo kale oo badan. Qoraagga waa aqoonyahaan cilmiga xanaanada xoolaha. Waa aqoonyahaan Soomaaliyeed oo aad u xiiseeya wax qorista. Qoraaladda qaarkiisa uu qoraaggaan leeyahay waxaad ka heli kartaa Tuke Somalism.